ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ ” တေမိယဇာတ်တော် ” ကြားဖူး ဖတ်ဖူးကြမှှာပါ။ ဘုရင့်သားပေမဲ့ တေမိမင်းသား လူ့ဘဝရတာ ရှင်ဘုရှင်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဖူးဗျ။ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပါရမီဖြည့်ဆည်းရအောင် လာတဲ့ ဘုရားလောင်း ကိုး …. – H2Oupdatenews
ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ ” တေမိယဇာတ်တော် ” ကြားဖူး ဖတ်ဖူးကြမှှာပါ။ ဘုရင့်သားပေမဲ့ တေမိမင်းသား လူ့ဘဝရတာ ရှင်ဘုရှင်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဖူးဗျ။ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပါရမီဖြည့်ဆည်းရအောင် လာတဲ့ ဘုရားလောင်း ကိုး ….
ကျွန်တော့် ဖွတ်စဖုတ် Htay Oung , Oung Marine အကောင့်ပြန်ရတာ ၃ ရက် မပြည့်သေးဖူးဗျ။ သို့သော် စာရေးတဲ့သူဆိုတာ ရေးစရာမြင်ရင် ဘယ်လိုမှ မအောင့်နိုင်ဖူးရယ်ကျကာမှ ကျရော
အကြမ်းဖက်ဥပဒေဖြင့်ပြည်ထဲရေးမှတရားစွဲဆိုခြင်းကို လူအများက NLDအစိုးရသာထင်မြင်နေကြောင်း မုံရွာအောင်ရှင်ပြော
အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥဒေဖြင့်ပြည်ထဲရေးမှတရားစွဲဆိုခြင်းကို လူအများက NLDအစိုးရသာထင်မြင်နေကြောင်း NLDပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးမုံရွာအောင်ရှင်ကပြောကြားလိုက်သည်။
“ပြည်ထဲရေးကတရားစွဲတာလူတွေကတော့ထစ်ကနဲရှိNLDအစိုးရပေါ့ဗျာ။တချို့ကလည်းဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမဖြစ်သင့်ဘူးတို့၊အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်တို့ပြောဆိုကြတယ်”ဟု မုံရွာအောင်ရှင်ကပြောသည်။
ထို့အပြင်သတင်းသမားများကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေဖြင့်အမှုဖွင့်ခြင်းသည်ပြင်းထန်လွန်းကြောင်း၊အရေးမယူမီသတင်းမီဒီယာကောင်စီနှင့်တိုင်ပင်သင့်ကြောင်း၊သတင်းမီဒီယာသမားများအနေဖြင့်AAအဖွဲ့ကို အားပေးထောက်ခံသည့်ပုံစံဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမျိုးသို့မဟုတ် ပြည်သူကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်ဆက်သွယ်ခြင်းမျိုးစသည်တို့ကို သုံးသပ်သင့်ကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုသည်။
သတင်းမီဒီယာသမားများအားယခင်ကတရားစွဲဆိုခြင်းများရှိသော်လည်းနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့်အကြမ်းဖက်ဥပဒေဖြင့်အမှုဖွင့်ခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်သတင်းမီဒီယာနှစ်ခုမှသတင်းသမားများကိုအမှုဖွင့်ထားသည်။
Previous Previous post: ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး၏ ထက်ဝက်မှာ ကိုဗစ်-နိုင်တင်းရောဂါ၏ ပိတ်လှောင်ခြင်းကို ခံနေကြရ။ ကူးစက်ကပ်ရောဂါနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ၏ လက်ရှိအခြေအနေ
Next Next post: ကိုဗစ်-နိုင်တင်းရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယအတွေ့ကြုံများမှ ဘာတွေ သင်ခန်းစာရမည်နည်း။ နံနက်ဖန် တနင်္ဂနွေသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ရောဂါပျိုးချိန် ဒုတိယကာလ၏ နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်သောကြောင့် အတိမ်းအစောင်း မခံဟု ပညာရှင်များ သတိပေး။ ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားရမည်နည်း